Hawlgabida - KPA Pension
Gudaha Iswiidhan ma lihin da’ hawlgabnimo oo go’an. Xadadka go’an qaarkood adiga ayaa dooran kara goorta aad doonaysid inaad gasho hawlgabnimo. Marba marka ka sii dambeysa ee aad doorato gelitaanka hawlgabnimo waxa sii sarreynaysa lacagta hawlgabka ee aad helayso. Tani waxa sabab u ah in aad sii haleelayso qaadashada lacag sii badan ah xilliga sannadahan dheeraadka ah iyo in lacagahan ay ku filnaan doonaan sannados ii yar maadaama aad banaanka ka tahay seylada shaqada.
Waxad qaadan kartaa lacagtaada hawlgabka ee shaqada, dhammaan ama qayb ahaan, ugu horreyn markaad buuxiso 61 sanno. Ka fikir in haddii aad gelayso halwgab aad la xidhiidho shaqo-bixiyahaaga.
Waxad lacagtaada hawlgabka ee guud qaadan kartaa ugu horreyn laga bilaabo da’da 61 sanno. Waa in adigu qof ahaantaada aad qaadashada ka codsato Hey’adda Lacagaha Hawlgabka.